eParewa || Peace and Prosperity » करेन्ट दुर्घटना: रवि ओड जस्तै पिडितको संख्या बृद्धि (भिडियो सहित)
करेन्ट दुर्घटना: रवि ओड जस्तै पिडितको संख्या बृद्धि (भिडियो सहित)
२०७५ माघ २३ गते बुधबार ०४:०२
शोकमा डुबेका रवि ओड मन बलियो बनाएर साङ्गीतिक कार्यक्रमका लागि विदेश यात्रामा छन्। रवि ओड शोकमै भएपनि 'मुटुमाथि ढुङ्गा राखी' उनी परदेश गएका नेपालीहरूलाई मनोरञ्जन दिन व्यस्त छन्। परिवारजनको पीडातर ओड परिवारले भोगेको शोक आलै छ।...
परिवारजनको पीडातर ओड परिवारले भोगेको शोक आलै छ। भारतको मुम्बईमा चौकिदारी गर्ने उनका बुवा कञ्चनपुर फर्किएका छन्। रवि ओडका भाइ जिगर ओडले बीबीसीसँग भने, “हाम्रो ठूलो क्षति भयो। ममी गुमाएको त्यो क्षण हामी बिर्सन चाहन्छौँ, तर बिर्सिन सकिरहेका छैनौँ।”
बीबीसीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा उनकी पत्नी धर्मशिला अधिकारीले टेलिफोनमा भनिन्, “कसको कमजोरीले उहाँको ज्यान गयो? म केही भन्न सक्दिन। तर दुई छोरा र एक छोरीलाई अब म एक्लैले कसरी हुर्काउने होला?”
कमजोरी कसको?त्यसको जवाफ सहज छैन। तर प्रश्न उठ्न सक्छ: कसको कमजोरीले त्यो जन्ती बसमा विद्युतको झट्का लाग्न पुग्यो र विवाह उत्सव मनाएर फर्किएका ६ जनाको ज्यान जाने गरी त्यत्रो ठूलो दुर्घटना भयो? के स्थानीय गाउँ वा नगरपालिकाको कमजोरी थियो त्यहाँ? कि नेपाल विद्युत प्राधिकरणकै लापर्बाही थियो? वा चालकको हेलचक्य्राइँले त्यो दुर्घटना भयो?
बिबिसि नेपाली सेवा-
भिडियो सहित पुरा पढ्न क्लिक गर्नुहोस
प्रकाशित मिति २०७५ माघ २३ गते बुधबार ०४:०२